Kaody ahafahana mampandeha ny fampitana antso avy amin'ny Movistar | Androidsis
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka, ho toy ny fampianarana azo ampiharina, raha azo antsoina hoe fomba tsotra ity dia hampianariko ianao ny kaody rehetra hahafahana mampandeha ny fampitana antso avy amin'ny Movistar.
Dingana iray izay hanatanterahantsika ny tenantsika amin'ny finday avo lenta miaraka amin'ny Ny hany fepetra maha mpanjifa Movistar anao sy ny maha-any amin'ny faritra misy ny tambajotram-pifandraisanay. Manaraka izany dia hazavaiko ireo kaody izay azontsika ampiasaina hampiasana na hampiatoana ny fandefasana antso avy amin'ny Movistar mankany amin'ny laharana finday na nomeraon-telefaona finday.
1 Ahoana ny fomba famonoana ny boaty mailaka Movistar
2 Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny fampitana antso Movistar
2.1 Alefaso ny fandefasana antso tsy misy fepetra amin'ny laharan-tariby na isa finday an'ny orinasa rehetra
2.2 Alefaso ny fampandehanana mandroso raha tsy mora tratrarina ianao
2.3 Alefaso ny fampandehanana mandroso raha sahirana ianao
2.4 Alefaso ny fampandehanana mandroso raha tsy mamaly ianao
2.5 Atsaharo ny fanodikodinana rehetra ao amin'ny Movistar
2.6 Sintomy ny App Movistar maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Ahoana ny fomba famonoana ny boaty mailaka Movistar
Para esory ny mailaka Movistar azonao atao amin'ny fiantsoana 22500 maimaimpoana izany na amin'ny fidirana amin'ny My Movistar amin'ny fampiharana izay ho hitanao amin'ny faran'ity lahatsoratra ity, na dia: Raha miasa ny serivisy MultiSIM dia mila miantso 1004 ianao mba hamonoana ny Movistar Mailbox avy ao amin'ny ivon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny fampitana antso Movistar
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia na dia maimaim-poana tanteraka aza ny fampidirana an'ity serivisy ity dia tsy maintsy arahin'ireto ianao izao: Ny vidin'ny fandefasana antso avy amin'ny nomeraonao mankany amin'ny nomera azonao aleha dia ny valin'ny fandanianao ny fiantsoanao ny tenanao amin'io isa io amin'ny taha nifanekenao. Raha manana tahan'ny fiantsoana tsy voafetra ianao dia tsy tokony hanahy momba ny fandaniana fanampiny na dia manana tahan'ny fandoavam-bola isaky ny antso ianao dia eny, ary amin'ity tranga ity, ny antso ampitaina tsirairay dia homena vola ho toy ny antso avy amin'ny nomeraon'ny Movistar anao mankany amin'ilay nomera nampitaina.
Alefaso ny fandefasana antso tsy misy fepetra amin'ny laharan-tariby na isa finday an'ny orinasa rehetra
Para mamela ny fampitana antso tsy misy fepetra, izany hoe, afindrao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny default amin'ny telefaona hafa ny antso rehetra, dia tokony ampidirintsika fotsiny ilay kaody avelako etsy ambany avy amin'ny mpandefa telefaona finday izay mitondra ny SIM Movistar amin'ilay isa tadiavintsika alefaso ny fampitana antso amin'ny alàlan'ny fampidirana ny nomeraon-telefaona handroso:
**iraika amby roapolo*Isa isa izay tianao hamily ny antso# ary tsindrio ny bokotra antso.
Amin'ity hetsika tsotra ity dia hamafisinao fa ny antso rehetra miditra, ary mandra-pikatonanao azy dia havily mankany amin'ny nomeraon-telefaona voalaza tamin'ny dingana teo aloha.
Para fantaro raha vita tsara ny fanodinana tsy misy fepetra dia ampy ny manamarika ity kaody manaraka ity:
21 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Para vonoy ity fanodinana tsy misy fepetra ity Tsotra toy ny fanamarihana ity kaody manaraka ity:
## 21 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Alefaso ny fampandehanana mandroso raha tsy mora tratrarina ianao
Para avelao ny fanodinana raha tsy mora tratrarina isika, dia rehefa novonointsika ny telefaona, tsy nisy bateria na rehefa tsy tratry ny fandrakofana isika, dia ampiasao ity kaody manaraka ity:
* 62 *Isa isa izay tianao hamily ny antso# ary tsindrio ny bokotra antso.
Para aza atao mandroso raha tsy mora tratrarina ianao ity kaody hanisy marika ity dia ireto manaraka ireto:
## 62 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Para zahao ny satan'ireo lalana mihintsy voalaza etsy ambony raha tsy tratra ianao izao no kaody:
62 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Alefaso ny fampandehanana mandroso raha sahirana ianao
Para alefaso ny fampitana antso raha sahirana ianao, amin'ny laharana finday na telefaona finday hafa isaky ny mifampiresaka ianao na mandà antso amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra mihantona dia izao manaraka izao ny kaody hiantso:
* 67 *Isa isa izay tianao hamily ny antso# ary tsindrio ny bokotra antso.
Para alefaso ny fampitana antso raha sahirana ianao, izao no kaody:
## 67 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Para zahao ny satan'ity fandefasana ityna ny kaody alefa amin'ny keyboard-n'ny smartphone-nao dia ireto manaraka ireto:
67 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Alefaso ny fampandehanana mandroso raha tsy mamaly ianao
Raha aorian'ny segondra vitsy dia tsy mamaly antso ianao dia halefa amin'ny nomeraon-telefaona voalahatra miaraka amin'ity kaody manaraka ity sy manaja an'ity endrika ity:
* 61 *Isa isa izay tianao hamily ny antso# ary tsindrio ny bokotra antso.
* 61 *Isa isa izay tianao handefasana antso **Miandry fotoana afaka segondra hampiharana ny lalana mihodina# ary kitiho ny bokotra antso.
El Miandry fotoana afaka segondra hampiharana ny lalana mihodina azo atao ny mametraka azy 5, 10, 15, 20 na 25 segondra ovay fotsiny ny soratra mena amin'ny fotoana irina afaka segondra.
Para alefaso ity fampitana ity raha tsy mamaly ianao ny kaody dia:
## 61 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Para zahao ny satan'ity fanodinana ity raha tsy mamaly ianao ny kaody dia ity:
61 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Atsaharo ny fanodikodinana rehetra ao amin'ny Movistar
Ilaina ny kaody ahafahana manafoana na vonoy daholo ny fanodikodinana rehetra amin'ny laharana telefaona hafa na raikitra ireo na finday dia ireto manaraka ireto:
## oo2 # ary tsindrio ny bokotra antso.
Fomba iray hafa anaovana azy amin'ny alàlan'ny rindranasa Mi Movistar amin'ny alàlan'ny fidiranao amin'ny NIF sy ny teny miafinao, na dia fomba iray tsy alefa ho an'ny mpampiasa rehetra aza izany, na dia irinao aza ny manamarina azy amin'ny alàlan'ny fampidinana azy amin'ny Google Play Store :
Sintomy ny App Movistar maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Developer: Espaina Movistar
Araka ny nolazaiko anao, ny tsy fanidiana na fampandehanana ireo fanovana antso hafa, avy amin'ny fampiharana My Movistar dia tsy misy amin'ny tranga rehetra, noho izany aleoko manolotra ny fanolorana amin'ny tanana ny kaody fampidirana na famonoana fepetra izay navelako anao etsy ambony izay dia ho ahy ny fomba haingana indrindra sy mora indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ireo kaody rehetra hahafahana mampandeha ny antso an-tariby Movistar avy amin'ny fakan-tsarinao.
Ao amin'ny One UI 3.0 ny fotoana fampiasana bateria hatramin'ny niverenan'ny fiampangana farany (farany)